သမ္မတ၏နေ့အတွက်အက်ပဲလ်၏ ၁၀.၂ လက်မအိုင်ပက်သည်ဒေါ်လာ ၂၄၉ သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည် - BGR - TELES RELAY
အမေဇုံမှရောင်းချမှုသည်တံခါးပေါက်ပေါ်တွင်ဒေါ်လာ ၅၀ သက်သာသည်။
Anker ၏လူကြိုက်များသော 10W အမြန်ကြိုးမဲ့ charger သည် ...
အက်ပဲလ်ရဲ့ iPad ထက်ပိုကောင်းတဲ့တက်ဘလက်မရှိဘူး။ အခုအချိန်မှာတစ်ခုထက် ၀ ယ်ဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူး။ လာမည့်တနင်္လာနေ့တွင် Presidents Day နှင့်အတူအက်ပဲလ်၏နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးအိုင်ပက်ဒ်သည်ယခုနှစ်အနိမ့်ဆုံးစျေးသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သင်ငွေအများကြီးသုံးရန်ဆန္ဒမရှိလျှင် ၁၀.၂ လက်မအိုင်ပက်ကဲ့သို့အရည်၊ စွယ်စုံနှင့်ခွန်အားရှိသည့်အခြားဘာမျှမရှိပါ။ တစ် ဦး အဘို့ကိုသာ $ 10,2 မှာ IPad 32 GB တ ဦး တည်းအဘို့အ $ 329 128 GB မော်ဒယ်, တန်ဖိုး unbeatable ဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ် IPad Pro တက်ဘလက်များ အရွယ်အစား ၁၁ နဲ့ ၁၂.၉ လက်မအရွယ်အစားရှိပြီး၊ အကယ်လို့သင်ကအဲဒီစွမ်းအားအားလုံးကိုတကယ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်အံ့သြစရာကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချပါ၊ သင်က super-fast tablet ကိုရယူဖို့လက်မောင်းတစ်ချောင်းကိုသုံးစရာမလိုပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၁၀.၂ လက်မမော်ဒယ်လ်ကသင်ထင်ထားတာထက်ပိုပြီးစွမ်းအားကြီးတယ်။ တိကျစွာဒီသမ္မတများနေ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခြင်းမပြုမီသူတို့ကိုထွက်စစ်ဆေးပါ။
Apple iPad အသစ် (၁၀.၂ လက်မ၊ ဝိုင်ဖိုင်၊ ၃၂ GB)
နောက်ဘက်ကင်မရာ 8MP၊ ၁. 1MP FaceTime HD ရှေ့ကင်မရာ
ဘက်ထရီ 10 နာရီအချိန်အထိ
Smart Keyboard နှင့် Apple Pen Support များ
လိုက် Twitter ပေါ်တွင် @BGRDeals ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ က်ဘ်ပေါ်ရှိနောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအပေးအယူများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်။ စျေးနှုန်းများသည်ကြိုတင်အသိပေးမှုမရှိပဲအပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်သည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောကူပွန်များသည်ပမာဏအနည်းငယ်သာရနိုင်သည်။ BGR သည်ဤဆောင်းပါးမှတစ်ဆင့်ပေးပို့သောအမိန့်များအတွက်ကော်မရှင်တစ်ခုရရှိနိုင်သည်။ လက်လီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်သည်စာရင်းစစ်ဆေးရန်အတွက်မှန်ကန်သောအချက်အလက်များရရှိနိုင်သည်။
ပုံရင်းရင်း - Framesira / Shutterstock
Tele RELAY တစ်ခု 22813 ရေးသားချက်များ0မှတ်ချက်များ
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ပြီးနောက် Guardiola ခြိမ်းခြောက်? - The Daily # 637 - ဗီဒီယို
အမေဇုံကိုရောင်းချခြင်းသည် Ring doorbell တွင်ဒေါ်လာ ၅၀ သက်သာစေသည်။
Anker ၏လူကြိုက်များသော 10W အမြန်အားသွင်းကြိုးသည်ဒေါ်လာ ၈.၄၉ ဖြင့်ရောင်းချသည်။